पूर्वमा तीज : हराउँदै गए ढकने र सङ्गिनी
मुग्लानी खबर संवाददाता झापा, २४ भदौ
तीज आयो भन्नेबित्तिकै उहिले माइतीघरमा मध्यरातमा आँखा मिच्दै ब्युँझिएर ‘दर’ भन्दै खाएको ढकनेको स्वादले ८५ वर्षीया हेमकुमारी आचार्यको अहिले पनि जिब्रो रसाउँछ ।
“आहा ! दर कति स्वादिलो हुन्थ्यो भने हामी अरु बेला पनि तीजमा पकाएको जस्तै ढकने पकाइदेऊ भनेर आमालाई कचकच गथ्र्यौँ”, मेचीनगर–१०, धुलाबारीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँ पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङका दिक्तेलमा ७७ वर्षअघि बालखैमा मनाइएको तीज सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, “अहिले त घरमा कम र बाहिर बेँसी ढर्रा गरेको देख्छु । उहिले घरघरमा सङ्गिनी खेलिन्थ्यो, मिठा–मिठा परिकार पकाएर छोरीचेलीलाई खुवाउने चलन थियो । अहिले त होटल र चोकबजारतिर खान्छन्, नाच्छन् ।”
आठ वर्षको कलिलो उमेरमा विसं २००१ मा दिक्तेलकै जयप्रसाद आचार्यसँग विवाह भएकी आचार्यका १२ छोराछोरी छन्, दर्जनौँ नाति–नातिना र पनातिनीहरु छन् । तीज आउँदा उहाँका घरमा निकै ठूलो जमघट हुने गर्दछ । रातो सारी र गहनामा सजिएका छोरीबुहारी देख्दा उहाँलाई भने पुरानो जमानामा आफूले मनाएको तीजको याद ताजा हुँदोरहेछ ।
बिहे भएपछिको पाँच वर्षसम्म तीजमा लिन बुवा आफैँ आउनुभएको उहाँले सम्झिनुभयो । “बालखैमा अर्काको घर जानुपरेको थियो, घर व्यवहार भनेको बुझेकै थिइन”, उहाँले बाल्यकालमा बुहार्तन व्यहोरेको सुनाउँदै भन्नुभयो, “रोएरै बित्थे दिनहरु । तीजमा बुवा लिन आउनुहुन्थ्यो, अनि मात्र मेरा आँखा ओभाउँथे । रातो सारी लगाएर, कुरुसले बुनेको फित्ते झोला टाउकामा भिरेर माइत जाँदा कम्ता खुशी लाग्दैनथ्यो ।”
माइत पुग्नासाथ आमाले ‘के खान्छेस्’ भनेर सोधेको र आफूले त्यही दर खान ढकने पकाइदिन आग्रह गरेको अहिले झल्झली याद आउने उहाँ बताउनुहुन्छ । तीजका बेला आमाले आलु उसिनेर पक्कु बनाई सेलरोटीसँग खुवाएको, कर्कलोको अचार हालेर घिउसँग भात मुछेर खुवाएको र आँगनमा फन्फनी घुमेर सङ्गिनी गाउँदै नाचेको सम्झना आइरहने उहाँले बताउनुभयो ।
तीजमा छोरीचेली माइत आउने र घरमा बुहार्तन सम्हाल्दाका दुःख र सास्तीका व्यथा आमालाई सुनाउने चलन उसबेला पनि थियो । सासु, नन्द र देउरानी–जेठानीका कर्कश व्यवहारका बारेमा गीत बनाएर सङ्गिनी गाउने चलन पनि उसबेला थियो । त्यसबेला पूर्वी पहाडमा लोकप्रिय सङ्गिनीको एउटा हरफ उहाँले यसरी सुनाउनुभयो–
धनकुटापारि त्यो लामीडाँडा चारकुने चौतारी,
छोरीको जन्म के दियौँ देउता सात जुनी औतारी ।
आठ वर्षमै बिहे गरेर घर गरी खान पठाइएकी उहाँले काम धन्दा गर्न जान्ने भएपछि तीजमा माइत जान नपाएको बताउनुभयो । सासुले माइत जान रोकेको सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मेरा पनि छोरीहरु माइतबाट आउँछन्, उनीहरुलाई तैले पकाइतुल्याई खुवाउनुपर्छ । अबदेखि दशैँमा मात्र जानु है माइत भनेर सासुआमाले भन्नुभयो । एक साल बुवा लिन आएर रित्तै फर्किनुभयो । म बेस्सरी रोएकी थिएँ ।”
“अहिलेको जस्तो कहाँ थियो र उसबेला”, आचार्य भन्नुहन्छ, “राति पनि दर खाइन्थ्यो, भोलिपल्ट पानीसमेत नखाई श्रीमान्को नाममा निराहार व्रत बसिन्थ्यो । सबै मिलेर तीजको पूजा लगाइन्थ्यो र सङ्गिनी गीतमा रातभर नाचिन्थ्यो नि नानी ।” तीजमा गहना लगाउने चलन पहिले पनि थियो । गहनाको रूपमा सुनको शिरबन्दी, हातमा चाँदीका बाला, गलामा कण्ठ, पुवालोका माला, रेजी र खुट्टामा चाँदीका कल्ली लगाउने चलन थियो ।
झापाको अर्जुनधारास्थित शङ्कराचार्य पीठ साधुटारका प्राचार्य लक्ष्मी खतिवडा तीज पौराणिक शास्त्रमा आधारित परम्परागत चाड भएको हुँदा यसको महत्व धर्म, संस्कृति र आस्थामा आलोकित भएको बताउनुहुन्छ । “पहिले–पहिलेका मानिस धर्मप्रति निष्ठापूर्वक आस्था राख्दथे, अहिले आस्थालाई देखावटी र फेसनको रूपमा मान्नेहरु बढेका छन्”, तीजको नाममा विकृतिसमेत बढेको जनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मान्छे जति आधुनिक भएता पनि आफ्नो संस्कृति र संस्कार छोड्न र तोड्न हुँदैन । शास्त्रसम्मत आचरणको खडेरी लाग्दै गएको छ ।”
उहाँले तीजको व्रतमा पानी पिउनै नहुने भनेर कुनै धार्मिकशास्त्रमा नलेखिएको बताउँदै हरेक ब्रतालुको आहार, विहार, व्यवहार र आचरण पवित्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै पानी पिएर व्रत बस्न कुनै रोकतोक नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ पुस्ताले तीज बिर्सिँदै गएका भने छैनन् तर उनीहरुले आधुनिकता भित्र्याउने क्रममा तीज मनाउने चलन भने निकै फेरिएको देखिन्छ । तीजको नाचगान र दर खाने कार्यक्रम पारिवारिक घेरामा मात्र अब सीमित रहेन । सामाजिक सङ्घसंस्थाले दर खाने भन्दै टोलटोलमा तीज कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा गत वर्षदेखि सार्वजनिक कार्यक्रम हुन भने पाएका छैनन् ।
घरधन्दा र चुलोचौकामा अल्झिएका अधिकांश महिला तीजमा मन खोलेर बाहिर आउने अवसर सिर्जना हुनुलाई नराम्रो ठान्न नहुने बिर्तामोड वडा नं ५ की निर्मला बुढाथोकीको धारणा छ । पहिलेजस्तो परिस्थिति अहिले छैन । धेरै महिला कामको बाध्यताले तीजमा माइत जान पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सामूहिकरूपमा आयोजित तीज कार्यक्रम नै महिलाका लागि चाड मनाउने खुशीको क्षण बनिदिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“संस्कृति र आधुनिकतामा आवश्यकतानुसार संयोजन गरेर चाड मनाउन सकिन्छ, तर होटलमा भोजभतेर, महङ्गा पहिरन र गहना प्रदर्शन चाहिँ विकृति भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्दछ”, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पति विदेश गएपछि विगत पाँच वर्षदेखि बिर्तामोडमा डेरा गरेर छोराछोरी पढाउँदै आउनुभएकी उहाँ भन्नुहुन्छ, “नारी स्वतन्त्रता र अधिकारका जतिसुकै भाषण र नारा लगाए पनि नेपाली महिलाले आज पनि परिवार, समाज र राज्यबाट विभेद भोग्नु परिरहेकै छ । हकअधिकार खोज्ने महिलालाई बाठी भएकी, नैतिक आचरण नभएकी र उत्ताउली भएकी भनेर अपमान गर्न खोजिन्छ ।”
नयाँ पुस्ताका बुहारी तीजको व्रत बस्दा भोकै बस्न रुचाउँदैनन् । सासुले ‘यसो गर र उसो गर’ भनेर सिकाएको पनि मन पराउँदैनन् । पढेलेखेका बुहारी भएका घरमा पुरानो संस्कार र आधुनिक संस्कारबीच द्वन्द्व देखिने गरेको छ । त्यसको झल्को तीजमा पनि देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सबैका घरमा ढकने नपाके पनि मिठो परिकार भने खाने चलन छँदैछ । अचेल माछामासु र मदिरापानले तीजको भान्सामा बढी प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । यसो हुँदै गयो भने ढकने जस्ता परम्परागत परिकार नयाँ पुस्ताले देख्न नपाउने जोखिम बढेको छ ।
सङ्गिनी लोकभाकामा आधारित असाध्य राम्रो पूर्वेली नृत्य हो । तीज, बिहे र व्रतबन्धजस्ता रमाइला सांस्कृतिक चाडहरुमा यो भाका र गीत गुञ्जिने गर्दछ । आमा र हजुरआमा उमेरका महिला यसमा नाच्दै रमाउने गर्छन् । तर यो परम्परागत नृत्यलाई नयाँ पुस्ताका महिलाले संरक्षण भने गर्न सकेका छैनन् । तीजमा नयाँ पुस्ताका महिलाले तडकभडकयुक्त तीज गीतमा नृत्य गरेको देख्न पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक तीज कार्यक्रममा पनि संस्कृति जोगाउनेभन्दा भत्काउने उत्ताउला गीतले ठाउँ पाउने गरेको महिला नै स्वीकार गर्छन् ।
तीज खासमा हिन्दू महिलाको धार्मिक चाड हो । महादेवलाई पति पाउनका लागि हिमालयपुत्री पार्वतीले तीजको निराहार व्रत बसेको पुराणहरुमा उल्लेख छ । यसैलाई आदर्श मान्दै हिन्दू विवाहित महिला पतिको सौभाग्यका लागि र अविवाहित युवती सुयोग्य पति पाउनका लागि तीजको व्रत र महादेवको आराधाना गर्छन्महादेवको आराधाना गर्छन्
प्रकाशित मिति: बिहिवार, भदौ २४, २०७८, १२:००:००
देउवा सरकारका ६० दिन : मन्त्रिमण्डल विस्तारमा नै कठिनाई !
‘एमसिसी नेपालले नै छनौट गरेको परियोजना हो’